Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Misokatra izao ny Krismasy ao amin'ny Biltmore House
Androany no manamarika ny fanokafana ny fankalazana ny fetin'i Biltmore manerana ny trano, Krismasy ao Biltmore. Ity fomban-drazana ity dia efa 125 taona mahery lasa izay rehefa nankalaza ny Krismasy voalohany niaraka tamin'ny fianakaviany sy ny namany tao amin'ny tranony vaovao i George Vanderbilt - Biltmore House. Asaina isan-taona ny vahiny mba hankafy ny hatsaran'ny fialan-tsasatra amin'ny trano. Ny tsy manam-paharoa amin'ity taona ity dia ny fahafahana hiaina Van Gogh Alive natolotry ny Grande Experiences, ny voalohany amin'ireo fampirantiana zava-kanto nomerika marobe marobe amin'ny andiany iray naharitra herintaona.
Tranon'ny Biltmore House
Ny Décor ao amin'ny Biltmore House dia ahitana hazo krismasy 62 vita amin'ny tanana, firavaka mihoatra ny 14,000, jiro fialan-tsasatra 45,000, labozia 250, garland 1,000 metatra, ary poinsettia 175. Ny haingon-trano dia ampitomboina amin'ny fara-tampony mba hanovana trano toa an'i Biltmore ho traikefa lehibe isan-taona.
Misy traikefa roa azo hankafizana an'i Biltmore mandritra ny vanim-potoanan'ny fialan-tsasatra - Krismasy ao Biltmore sy ny hariva Krismasy Candlelight. Ny trano manontolo dia misokatra ho an'ny vahiny ho ampahany amin'ny fidirana amin'ny traikefa Krismasy.
Krismasy ao amin'ny fankalazana antoandro Biltmore, 5 Novambra 2021 - 9 Janoary 2022
Ity fomban-drazana ity dia ahitana fitsangatsanganana antoandro ao amin'ny Biltmore House raha toa ka voaravaka haingon-trano fialantsasatra izay an'arivony ny trano.
Takarivan'ny Krismasy hazavan'ny labozia, 5 Novambra 2021 – 8 Janoary 2022
Ny trano Biltmore dia mamirapiratra amin'ny labozia sy ny afo mandritra ity fitsangatsanganana amin'ny alina ity, manova ny fihetseham-pon'ny fitsidihana antoandro sy ny traikefa. Ireo mpitendry mozika mipetraka manerana ny trano dia manao ny ankafizin'ny vanim-potoana.
Fampirantiana zavakanto nomerika "Van Gogh Alive".
Ny ampahany iray amin'ny andian-javakanto nomerika naharitra herintaona ao amin'ny Biltmore, Legends of Art & Innovation, dia mifanaraka amin'ny fanombohan'ny fotoam-pialan-tsasatra miaraka amin'ny fanokafana ny Van Gogh Alive natolotry ny Grande Experiences. Nampiantranoina tao amin'ny foibe hetsika Biltmore, Amherst at Deerpark, ary mandeha hatramin'ny 5 martsa 2022, ity traikefa an-tsaina marobe ity dia asitrika ao anatin'ny fiainan'i Vincent van Gogh mahavariana amin'ny alàlan'ny hazavana, loko, feo ary hanitra.
Zava-nisongadina amin'ny fialan-tsasatra eo amin'ny tokotanin'ny trano: fivarotana pop-up Krismasy vaovao, divay famoahana voafetra, hazavana lehibe ary maro hafa
Ny hetsika fialantsasatra dia hita manerana ny trano. Ao anatin'ny Conservatory dia misy poinsettia, amaryllis, kaktus Krismasy, bromeliads, orkide, lilia fihavanana, sy ny maro hafa. Ny zaridaina ririnina ao amin'ilay trano sy ny lalana milamina amin'ny kilaometatra maro dia azo jerena ihany koa.
Ny Antler Hill Village dia manolotra fisehoana avy amin'i Santa ho an'ny sary sy hihaino ny lisitry ny faniriana 6 Novambra ka hatramin'ny 23 Desambra. Rehefa tonga ny hariva eo amin'ny Antler Hill Village, ny antokon'ny jiro fialan-tsasatra dia manazava hazo, tranobe, tonelina Winery ary lalana mandeha. Fivarotana pop-up Krismasy feno izay rehetra ilaina hankalazana ny vanim-potoana.